फिचर  OnlineKhabar
‘मन्द बिष’ घुलेको हावामा यसरी बाँचेको छ सिसडोल (फोटोफिचर)
३१ साउन, काठमाडौं । सुन्दर गाउँ सिसडोल एक दशक अघि एउटा स्वर्गको टुक्रा जस्तो थियो । अहिले सिसडोलको परिचय फोहोरसँग मात्रै गाँसिएको जस्तो स्थिति बनेको छ । काठमाडाैंको डम्पिङ साइट बनेपछि सिसडोलकाे सबै लुटिएको बताउँछन् स्थानीय बासिन्दा । हाल काठमाडौंको फोहोर महिनौंदेखि नियमित रुपमा उठ्न सकेको छैन । सिसडोलको ल्याण्डफिल्ड साइटमै समस्या भएको भन्दै...
फुर्सदिला खेल प्रशिक्षक : सरकारी तलब खान्छन्, निजी काममा व्यस्त हुन्छन्
३० साउन, मोरङ । विराटनगरका नारायण बुढाथोकी सितेरियो कराँतेका प्रशिक्षक हुन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट प्रशिक्षकमा नियुक्त बुढाथोकी जिम्मेवारीअनुसार प्रशिक्षणको काममा खटिनुपर्ने हो । तर, उनी प्रशिक्षणमा होइन, अधिकांश समय निजी पसलमा व्यापार व्यावसाय गरिरहेका भेटिन्छन् । बुढाथोकीले शहीद रंगशाला अगाडि विराट स्पोर्टस एण्ड स्टेेशनरीको पसल सञ्चालन गरेका छन् । राखेपमा खेल प्रशिक्षकको जागिर...
३० साउन, काठमाडौं । आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको कारणले बारम्बार विवादमा आइरहने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको पनि उच्चारण बिगारेर बोलेको खुलासा भएको छ । राजनीतिक समाचार प्रकाशन गर्ने अमेरिकी पोर्टल पोलिटिकोले यस्तो खुलासा गरेको हो । पोलिटिकोका अनुसार ट्रम्पले गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुअघि तयारीको क्रममा नेपालको उच्चारण बिगारेर ‘निप्पल’ भनेका थिए...
२९ साउन, काठमाडौं । सानो कोठा, एउटा कुनामा खाट छ, छेउमा पुरानो टेबल, सोफा, टि-टेबल मात्र होइन, पंखा, हेलमेटदेखि लत्ता कपडा असरल्ल छरिएका थिए । सोमबार मध्यान्ह बाहिर झमझम पानी पहिरहँदा काठमाडौं-१६ बालाजुका भीमदेव श्रेष्ठ साँघुरो कोठामा सामान मिलाउँदै थिए । पाँच वर्षकी नातिनीदेखि ९५ वर्षीय आमासहित श्रेष्ठको आठ सदस्यीय परिवारले यही डेरामा बस्न...
यी हुन् बस्नलायक १० शहर, भियना पहिलो नम्बरमा
२९ साउन, काठमाडौं । विश्वमै बस्नलायक शहरको सूचीमा अष्ट्रियाको भियना पहिलो नम्बरमा परेको छ । बस्न लायक नरहेको सूचीमा भने युद्धग्रस्त सिरियाको राजधानी दमास्कस परेको छ । इकोनोमिक इन्टिलिजेन्स युनिटले विश्वमा बस्न लायक उत्कृष्ट १० शहरहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यो सूचीमा अष्ट्रियाको भियना पहिलो नम्बरमा पर्दा अष्ट्रेलियाको मेलबर्न दोस्रो नम्बरमा छ ।...
१७ ग्राफिक्समा ओली सरकारको ५ महिने काम
२८ साउन, काठमाडौं । केपी ओली सरकारले आफ्नो पाँच महिने अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सोमबार सरकारले रंगीन कलेबरमा ७४ पृष्ठ लामो पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । ‘वर्तमान सरकारका ५ महिना’ शीर्षकमा प्रकाशित पुस्तिकामा सरकारले ५ महिनामा गरेका काम र अब गर्ने कामहरुको फेहरिस्त दिइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति...
भारतले आसामका ४० लाख ‘आप्रवासी’लाई देश निकाला गर्छ ?
२५ साउन, काठमाडौं । भारतको उत्तर पूर्वी राज्य आसामका करिब चालिस लाख मानिसहरुले आफ्नो नागरिकता गुमाएका छन् । उनीहरुलाई प्रमाणित नागरिकको सूचीबाट हटाइएको छ । उक्त सूची सरकारले छिमेकी देश बंगलादेशबाट छिरेका अवैध आप्रवासीहरुलाई पहिचान गर्ने प्रक्रियाको रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । भारत सरकारले ले यो विवादास्पद कदम चाल्नुको कारण के हो र अब...
२५ साउन, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरले बुधबार लागूऔषध गाँजा बिक्री गर्दै गरेको सूचनाको आधारमा शान्तिनगर क्षेत्रबाट सरोज लामालाई पक्राउ गर्‍यो । ब्रिटिस फाइनान्स कम्पनीमा सेक्यूरिटी गार्डको रुपमा कार्यरत लामाको पर्दा पछाडिको धन्दा गाँजाको बिक्री वितरण गर्नु भएको खुल्यो । उनले आफ्नो सेवाग्राही बानेश्वर क्षेत्रका विभिन्न होस्टलहरुमा बस्ने विद्यार्थीदेखि कलेजमा पढ्नेसम्म भएको...
फेरियो भरतपुर र नारायणगढ, यसरी हुँदैछ व्यवस्थित
२५ साउन, चितवन । एक समय मानिसहरुलाई लाग्थ्यो, नारायणगढ बजार झर्न नपरे पनि हुन्थ्यो । साँघुरो सडक, गुडेका रिक्सा र ट्याम्पो, म्याजिकको दादागिरी । सडक पेटीमा विस्कुन सुकाए झै सामान राखेर ब्यापार गर्नेहरु । कपाल काट्ने त्यही, जुत्ता पालिस लगाउने पनि त्यही, दुर्गन्ध उतिकै । सर्वसाधारण नागरिकलाई नत फुटपाथमा हिँड्न सहज थियो, नत सडकमा...
२४ साउन, काठमाडौं । गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीका छोरा नुरप्रसादलाई प्रहरीले आइतबार सानेपाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि साँझ वीर हस्पिटलमा नुरप्रसादलाई आमाको जिम्मा लगाउने तयारी हुँदै थियो । कान्छा छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाहीको माग गरिरहेकी गंगामायाको अनसन तोड्ने क्रममा जेठा छोरा नुरप्रसादको खोजी गरिदिनु भन्ने गंगामायाको आग्रहअनुरुप प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा...
२४ साउन, युएई । डेढ महिनादेखि युएईको अस्पतालमा कोमामा उपचारत इलामका जङ्गबहादुर लुङ्गेली साउन १६ गते नेपाल फर्किएका छन् । कोमामै रहेका अन्य ५ नेपाली भने कहिले फर्किएलान् भन्ने टुंगो छैन । नेपाल सरकारले विदेशका अस्पतालमा कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याएर उपचार गर्ने बताएको छ । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा युएईमा छन्- पर्वतका...
सडक अनुगमनः माधव नेपालले ब्यंग्य हाने, मन्त्रीले जुत्ता टकटक्याए
२४ साउन, काठमाडौं । चाबाहिल-जोरपाटी-साखुँ सडकको दुर्दशाका थुप्रै कथाहरु बने । कहिले स्थानीयले हिलाम्ये सडकमा धान रोपे त कहिले गाडी नै बन्द गरे । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ । अलि ठूलो पानी पर्‍यो भने सानोतिर डुंगा नै चलाउने मिल्ने गरी पानी जम्छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा यात्रा गरेकाहरु नलडेको दिन छैन । पैदलयात्रु र...
123 … 263 पछिल्ला »
संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ खनाल भन्छन्- रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्यो !
संघीयताबारे कृष्ण खनाल भन्छन्- रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्यो !
काठमाडौंको फोहोरमा भेटिएकाहरू भन्छन्- ५० वर्ष पनि नबाँचिने भइयो !
वीरको उपकुलपति र टिचिङको निर्देशक नियुक्तिको तयारी
मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भन्छन् : डाक्टरहरु एप्रोन लिएर आए बुझाउँछन्, जान्छन्
कांग्रेसमा एजेण्डाको खोजीः सरकारलाई गाली गर्ने कि विकल्प दिने ?
नेपालीहरू किन विद्युतीय कार चढ्न रुचाउँदैनन् ?